Olee otú Naghachi Lost Music si iTunes on PC / Mac
> Resource> iTunes> Nzọụkwụ naghachi Lost iTunes Music
"M nwere ụfọdụ songs furu efu si iTunes Library? È nwere ụzọ ọ bụla naghachi furu efu iTunes music? M na-achọgharị na Ịntanetị, ọ gwara m ka m na-eji dochie ọhụrụ iTunes Library.itl na otu agadi otu. N'ezie, m na dị nnọọ dọwara ụfọdụ ndị ọhụrụ songs na tinye ha iTunes Library. enweghị m ike ime nke ahụ. echiche ọ bụla? "
Naghachi furu efu iTunes music, dochie ndị ọhụrụ iTunes faịlụ, iTunes Library.itl na otu agadi faịlụ bụ ezi echiche. Otú ọ dị, site n'ime nke a, ị ga-atụfu ndondo kwukwara listi ọkpụkpọ, songs, na vidiyo. Ọ bụrụ na ndị a faịlụ pụtara a otutu gị, ị kwesịrị ị na-etinye ọzọ workaround. Na-esonụ, ga-amasị m ịkọrọ gị otú naghachi furu efu music si iTunes mfe. Soro nzọụkwụ n'okpuru naghachi furu efu music na iTunes.
Wondershare TunesGo bụ ngwa na anyị na-aga na-eji na-agbake furu efu iTunes music. Dị ka ị na-ahụ ma TunesGo (Windows) na TunesGo (Mac) nwere ike ibudata ebe a. Ị kwesịrị ị na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị. Na-esonụ, Aga m ewere otú naghachi furu efu music si iTunes on Windows PC dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iOS ngwaọrụ PC
Biko jikọọ otu nke gị iOS ngwaọrụ, na-ekwu, iPhone, iPad, ma ọ bụ iPhone na gị PC. Biko hụ a iOS ngwaọrụ ị na-eji nwere songs na ị na furu iTunes. Wondershare TunesGo (Windows) na-akwado iPhone, iPod, iPad. Lee akwado ngwaọrụ. Ẹkedori TunesGo. Ọ ga-ewe TunesGo sekọnd ole na ole na-aghọta gị iOS ngwaọrụ na-egosipụta ya na isi window.
Nzọụkwụ 3. Naghachi furu efu music on iTunes
Ebe ọ bụ na gị iTunes furu efu music nọ gị iOS ngwaọrụ. Ugbu a, i nwere ike iji TunesGo nyefee a furu efu songs azụ iTunes. Pịa Media na n'aka ekpe iji bugote media window. Site na ndabara, akpa taabụ na Media window bụ maka music. All songs na gị iOS ngwaọrụ na-egosipụta ebe a. Họrọ ndị chọrọ ndị na pịa triangle n'okpuru "Export" menu. Site ndọpụta ndepụta, họrọ "Mbupụ na iTunes Library". Ọ na-ewe sekọnd ole na ole rụchaa usoro nke mgbake iTunes furu efu music.
Nke a bụ otú naghachi furu efu music on iTunes. Ozugbo ị synced music si iTunes ka iOS ngwaọrụ, i nwere ike iji Wondershare TunesGo iji nweta ha azụ iTunes na kọmputa. Nke a bụ ihe dị egwu ụzọ naghachi iTunes furu efu music.